Drama တွေထဲမှာ မောင်နှမအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လို့ရလောက်တဲ့ Korea အနုပညာရှင်များ | News Bar Myanmar
Drama တွေထဲမှာ မောင်နှမအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လို့ရလောက်တဲ့ Korea အနုပညာရှင်များ
K Drama တွေထဲမှာတော့ ဝါရင့်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ မောင်နှမဇာတ်ရုပ်တွေ ငယ်ဘဝဇာတ်ရုပ်တွေကို တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်လေးတွေနဲ့ idol တွေက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက အခုဖော်ပြမယ့် ရုပ်ချင်းဆင်တူတဲ့ idol နဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေကိုလဲ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုခုမှာ မောင်နှမရင်းချာအဖြစ် မြင်တွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့။
၁။ Son Ye Jin & Jisoo (BLACKPINK)
သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ဒီလိုယှဉ်တွဲကြည့်လိုက်မှ အတော်လေးဆင်တူသလိုပါပဲနော်။ အထူးသဖြင့်တော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အလှနဲ့ အားရပါးရပြုံးတတ်တဲ့ ချစ်စဖွယ်အပြုံးချိုချိုလေးတွေက ခပ်ဆင်ဆင်မို့ ညီအစ်မအဖြစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ရင်အတော်လေး သဘာဝကျမှာပါ။
Jisoo ကို Son Ye Jin ရဲ့ ညီမလေးအဖြစ် မြင်ရမယ့် drama သာထွက်ရှိလာရင်တော့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်ပါပြီ။
၂။ Kim Tae Ri & D.O. (EXO)
မင်းသမီး Kim Tae Ri နဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ကတော့ နွေးထွေးတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေချင်း ဆင်တူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်ယောက်လုံးမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် စကားပြောတဲ့ဟန်လေးရှိတာမို့ မောင်နှမအဖြစ် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရင်တော့ တကယ်ကိုပီပြင်မှာပါ။
D.O. ကလဲ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးမှုတွေ ခပ်စိပ်စိပ်ရှိနေတာမို့ ဒီနှစ်ဦးကို မောင်နှမအဖြစ်မြင်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ပုဒ်ကိုလဲ မျှော်လင့်ထားလို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
၃။ Song Hye Kyo & Irene (Red Velvet)
နှစ်ဦးစလုံးက ကြည့်မဝချင်စရာ ချောမောလှပသူတွေမို့ အလှပဂေးညီအစ်မနှစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်ကို သဘာဝနဲ့နီးစပ်ပြီး ပီပြင်မှာပါ။ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ အနေအေးတဲ့ပုံစံလေးတွေ တူညီတဲ့အပြင် ဖြူဖွေးနုဖတ်တဲ့ မျက်နှာလေးတွေနဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းလေးတွေက တကယ့် ညီအစ်မရင်းတွေလို့တောင် ထင်ရပါတယ်။
၄။ Seohyun (Girls’ Generation) & Cha Eunwoo (Astro)
သူတို့နှစ်ဦးကို မောင်နှမအဖြစ် မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ drama ဟာ အတော်လေး သဘာဝကျမယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ Seohyun က ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အစ်မလှလှလေးဇာတ်ရုပ် Cha Eunwoo ကအနေအေးပြီး ချောမောတဲ့မောင်လေးဇာတ်ရုပ် အသီးသီးနဲ့ အတော်လေးဆင်တူတဲ့ မောင်နှမတွေအဖြစ် သင့်တော်မှာ အသေအချာပါပဲ။
၅။ Im Siwan & WinWin (WayV)
ဒီနှစ်ဦးကတော့ အမြွာအဖြစ်တောင် သရုပ်ဆောင်လို့ရလောက်ပါတယ်။ Win Win ဟာ ပွဲဦးထွက်စကတည်းက Im Siwan နဲ့ဆင်တူတယ်လို့ လူပြောများခဲ့တာကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ညီအစ်ကိုအဖြစ် တကယ်ကိုတွဲဖက်သင့်ပါတယ်။ မျက်နှာကျပုံစံကအစ မျက်ခုံးမျက်လုံး၊ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကအစ သွေးသားရင်းချာတွေလို ဆင်တူပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေရော ဒီအတွဲအဖက်တွေထဲက ဘယ်သူတွေကိုများ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုတည်းမှာ မောင်နှမရင်းချာအဖြစ် တွေ့မြင်ချင်ကြသလဲဆိုတာ မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်။
Next Lee Kwang Soo နဲ့ EXO ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Oh Sehun ကြားက ချစ်စရာ ညီအစ်ကိုသံယောဇဥ် »
Previous « ဆိုရခက်တဲ့ High note ကို အသာလေးသီဆိုနိုင်တဲ့ Kpop Idol (5)ယောက်